ကွမ်းသီးဝါးခြင်းကို ယနေ့ပင်ရပ်လိုက်သင့်သည့် အကြောင်း (၇) ခု – Shwehealth.com
ကွမ်းသီးဝါးခြင်းကို ယနေ့ပင်ရပ်လိုက်သင့်သည့် အကြောင်း (၇) ခု
16. ဇှနျ 2016 23. မေ 2016
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွမ်းသီးဝါးခြင်းသည် လူကြိုက်များသော အလေ့အကျင့်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပြီး မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့သော အလေ့အကျင့်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ကွမ်းသီးကို အမွှေးများသော ကွမ်းသီးပင်မှ ရရှိပြီး ယင်းတို့သည် အာရှနေရာအတော်များများနှင့် အာဖရိက နေရာအချို့တွင် ပေါက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ WHO အရ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတွင် ကွမ်းသီးကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် အသုံးပြုနေသူပေါင်း သန်း ၆၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွမ်းသီးကို စိပ်၍လည်း ကောင်း၊ အပြားလိုက်လွှာ၍လည်းကောင်း စားသုံးလေ့ရှိကြသော်လည်း အသုံးပြုမှုအများဆုံးမှာ လွှာ ထားသို့မဟုတ် စိပ်ထားသော ကွမ်းသီးကို ထုံးသုတ်ထားသော ကွမ်းရွက်ထဲတွင် ထည့်၍ စားသုံးခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ကွမ်းယာဟုခေါ်သည်။ ဆေးရွက်ကြီးသို့မဟုတ် အရသာပါသော အမွှေးအ ကြိုင်များလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ ကွမ်းသီးဝါးခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးထက် ဘေး ထွက်ဆိုးကျိုးက ပိုများသည်။ ထို့အပြင် ကွမ်းယာဝါးခြင်းမှာလည်း ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ထုံးတို့၏ပါဝင်မှု ကြောင့် ပို၍ပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသေးသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ကွမ်းသီးဝါးခြင်း၏ သိသာထင်ရှားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖော်ပြ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို သင့်အား အဆိုပါအကျင့်ကို ဖျောက်နိုင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေ မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို အားပေးခြင်း
ယင်းသည် အထင်ရှားဆုံး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွမ်းသီးကို WHO မှ ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သော အရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကွမ်းသီးဝါးခြင်းဖြင့် ပါးစပ်အတွင်း၌ ကင်ဆာနှင့် ဆိုင်သော အပြောင်းအလဲများကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ခံတွင်း၊ လည်ပင်း၊ အသံအိုးနှင့် အစာရေမျိုကင်ဆာ များကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ ယင်းတမျိုးထဲကို အသုံးပြုခြင်းကပင်လျှင် အဆိုပါ ကင်ဆာများဖြစ်စေရန် လုံလောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဆေးရွက်နှင့် ထပ်မံပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ဆေးရွက်ကြီးများသည် လည်း အလွန်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော အရာများဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေ များစွာ မြင့်တက်လာ မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) ခံတွင်းအချွဲအောက် မျှင်ထူပွားခြင်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားလာခြင်း
အခြားထင်ရှားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာ ကွမ်းသီးဝါးခြင်းကြောင့် ခံတွင်းအချွဲအောက် မျှင်ထူပွားခြင်းရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်မှုမြင့်တက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းရောဂါသည် ပါးစပ်အတွင်း တောင့်တင်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး မေးရိုးလှုပ်ရှားမှုကို ပျောက်ဆုံးစေနိုင်သည်။ ပို၍ဆိုးသည့်အချက်မှာ ယင်း ရောဂါမှာ ကုသ၍ မရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
(၃) ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့် အဆိပ်ဖြစ်ခြင်း
ယခုအခါတွင် ကွမ်းသီးကို အကျော်ကြားဆုံး စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေသော ပစ္စည်းအဖြစ် ကမ္ဘာ တ၀ှမ်းတွင် လက်ခံထားကြသည်။ ကွမ်းသီး၏ရှေ့တွင် နီကိုတင်း၊ အယ်လ်ကိုဟောနှင့် ကဖင်းတို့သာ ရှိသည်။ ကွမ်းသီးတွင် သဘာဝအယ်ကာလွိုက်များပါဝင်ပြီး ယင်းတို့က အက်ဒရီနယ်လင် ဟော်မုန်း ကို ထွက်စေသည်။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် လှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်သော သတိရှိခြင်း၊ သက်လုံကောင်းစေ ခြင်း၊ နေထိုင်၍ကောင်းခြင်း၊ စိတ်အားတက်ကြွခြင်းနှင့် သွားရည်ထွက်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင် သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းတို့သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်လောက်အောင် ကျန်းမာရေး အတွက် အကျိုးမများပေ။ ထို့အပြင် ကွမ်းသီးသည် အလွန်အမင်းစားသုံးမိပါက အဆိပ်သင့်ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သေးသည်။
လတ်တလောလေ့လာချက်များအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့်နို့တိုက်ချိန်တွင် ကွမ်းသီးဝါးခြင်း သည် DNA ပျက်စီးမှုနှင့် သန္ဓေသားပျက်စီးမှုတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင် သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သို့မဟုတ် နို့တိုက်မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါက ကွမ်းသီး ၀ါးခြင်းမှ ရှောင်ရှားသင့်ပေသည်။
(၅) မှီခိုမှုနှင့် စွဲလမ်းမှု
အခြားသော ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို လှုံ့ဆော်သည့် အရာများကဲ့သို့ပင် ယင်းသည်လည်း ကြီးစွာသော မှီခိုမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မည်သည့်မှီခိုပင်ဖြစ်စေ လူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ မ ကောင်းပေ။ ကွမ်းသီးကဲ့သို့သော ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို လှုံ့ဆော်နိုင်သော အရာတစ်ခုအပေါ်မှီခို ခြင်းမှာ ပို၍ဆိုးသည်။ ကွမ်းသီးဝါးခြင်း သို့မဟုတ် ကွမ်းယာဝါးခြင်းကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းပြုလေ့ရှိသူတစ် ယောက်အတွက် အစားအသောက်တစ်ခုခုစားသောက်ပြီးချိန်တွင် ယင်းတို့ကို မစားရပါက မနေနိုင် မ ထိုင်နိုင်ဖြစ်တတ်ပြီး ဂနာမငြိမ်ဖြစ်လာသည်အထိပင် ဖြစ်တတ်လေသည်။
ကွမ်းသီးဝါးခြင်းနှင့် နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါအကြားတွင် ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကို ပြနိုင် သော လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာ ရှိသေးသည်။ သို့သော် ယင်းကိုလည်း လစ်လျှူရှုမထားသင့်ပေ။ ကွမ်းသီးသီးသန့်ဝါးခြင်းထက် ကွမ်းယာစားခြင်းကို ပို၍နှစ်သက်ကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအ တွက်မူ ကွမ်းယာတွင်ပါဝင်သော ထုံးမှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထုံး ကို များစွာသို့မဟုတ် ကာလကြာ စားခြင်းဖြင့် ဆီးကျောက်တည်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် အခြား ကျောက်ကပ်ရောဂါများကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
(၇) ခံတွင်းရောဂါများအပါအ၀င် အခြားရောဂါများနှင့် ဆက်စပ်မှု
ကွမ်းသီးဝါးခြင်းသည် ခံတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်ကြသည့် သွားဖုံးများရေစီးကမ်းပြို လိုက်ခြင်း၊ သွားများပျက်စီးခြင်း၊ သွားအရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့် သွား၏ကြွေလွှာကို ပျက်စီးစေခြင်းတို့ နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အခြားလေ့လာမှုအရ အချို့သော နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများနှင့် ဇီဝ ကမ္မရောဂါစုကဲ့သို့သော ရောဂါများသည် ကွမ်းသီးဝါးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။